प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? – NepalajaMedia
March 20, 2021 15908
काठमाडौं । प्याजको सेवन गर्न तपाई कति रुचाउनु हुन्छ ? वा सेवनमा धेरै भएको त छैन् ? वा त्यसको बास्ना मन पर्दैन ? वा सेवन गर्न उचित मान्नु हुन्न ? तर प्याजका धेरै उपयुक्तता मध्य एक हो यौ’न क्षेत्रमा बृद्धि ।
महिलाको भन्दा पुरुषमा यौ’न शक्ती कमजोर हुने र छिटै सिथिल हुने भएकाले पनि पुरुषले विभिन्न औषधीहरु प्रयोग गरेको पाइएको छ । तर त्यो भन्दा प्याजको सेवन धेरै राम्रो हुन विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । प्याजको नियमित सेवनकै कारण यौ’न क्षमता बढेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
Prevभाकल के हो, के भाकल गरेपछि बुझाउनै पर्छ, नबुझाउँदा के हुन्छ जान्न जरुरी छ;
Nextकाठमाडौ कोटेश्वरको घट्यो अनौठो घटना, प्रहरी समेत चकित